Somalia: Heshiiskii Galmudug iyo Ahlu Sunna oo maanta la dhameystirayo - Wargane News
Home Somali News Somalia: Heshiiskii Galmudug iyo Ahlu Sunna oo maanta la dhameystirayo
Sida uu qorshaha yahay magaalada Dhuusa-mareeb waxaa maanta lagu wadaa in uu ka dhaco Shirweyne lagu dhameystirayo heshiiskii magaalada Muqdisho ay ku kala saxiixdeen Maamulada Galmudug iyo Ahlu Sunna.
Ujeedka Madaxweynaha Soomaaliya uu u tagayo Dhuusa-Mareeb ayaa qeyb ka ah sidii uu uga qeyb geli lahaa Shir-weynaha lagu dhameystirayo heshiiska maamulada Galmudug iyo Ahlu Sunna.
Sidoo kale magaalada Dhuusa-Mareeb waxaa ku sugan qaar ka tirsan Madaxda Maamul Goboleedyada dalka oo uu ugu horeeyo Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, qaar kalena maanta ayay ku wajahan yihiin.
Sidoo kale Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa xalay kulamo la qaatay dhinacyuada Galmudug iyo Ahlusuna, Odayaasha dhaqanka, wuxuuna u sheegay in muhiim in heshiiskan la dhameystiro si horey loogu sii socdo.
Ammaanka magaalada Dhuusa-mareeb ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana suggidda amniga iska kaashanaya Ciidanka Dowladda, kuwa Galmudug iyo kuwa Jabuuti.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay Dhuusa-Mareeb waxaa uu kulamo wadatashi la yeelan doonaa madaxda heer Dowlad goboleed iyo heer degmo, culumada, duubabka dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.